सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरण : प्रहरीमा उजुरी दिने तयारीमा समाजवादीका नेता – Koshidaily
सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरण : प्रहरीमा उजुरी दिने तयारीमा समाजवादीका नेता
access_alarms Koshi daily १४ बैशाख २०७७, आईतवार ०६:३६	chat_bubble_outline 0	Comments
पार्टी फुटाउन सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइएको घटनामा प्रहरीमा उजुरी गर्नेबारे जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले कानूनी परामर्श अघि बढाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले यस विषयमा परामर्श थालेका छन् ।
डा. यादवलाई पार्टी फुटाउन अपहरण गरेरै काठमाडौं ल्याइएको आरोप सो पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल महोत्तरी पुगेर डा. यादवलाई बिहीबार बिहान काठमाडौं ल्याएका थिए । तत्कालिन समाजवादी पार्टी फुटाउन ७ सांसद चाहिनेमा ६ मात्र भएपछि आफुलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर काठमाडौं ल्याइएको डा. यादवले बताएका छन् ।
अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा :कानूनविद्हरुले यो घटनामा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चल्ने बताएका छन् । काठमाडौं आउन अनिच्छा हुँदा पनि आफुलाई छाड्दै नछाडिएको उनको भनाई छ । काठमाडौं ल्याएर पनि म्यारियट होटल बुक गरेर राखिएको थियो । बिहान आफु त्यहाँबाट भागेको उनले बताएका छन् ।
‘धेरै जसो नेताहरु कानूनी कारबाहीमै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्,’ जनता समाजवादीका एक नेताले भने,‘सुरेन्द्र यादवजी तनावमा हुनुहुन्छ, उहाँले अझै असुरक्षित महशुस गर्नुभएको छ ।’ डा. यादव उजुरी दिने नदिनेमा अन्योलमा छन् ।
उजुरी नदिन उनीमाथि दबाब दिइएको स्रोत बताउँछ । अपहरण गरेको भनेर सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाएपछि उजुरी नदिंदा झुटा आरोप लगाएको भन्दै प्रश्न उठ्ने भएकाले उजुरी दिनुपर्ने पक्षमा धेरै नेताहरु छन् । समाजवादीका नेताहरुले शनिबार केही कानूनविद्हरुसँग यसबारे राय लिएका छन् ।
स्वार्थ पूरा गर्ने खेल
सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठको डा. यादवसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसकारण उनीहरुले पूर्व आईजिपी खनाललाई प्रयोग गरेका हुन् । खनाल र डा. यादवबीच पुरानो चिनजान थियो । दुवै सांसद र पूर्वआईजिपी खनाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रभाव पारेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा छन् । त्यसकारण उनीहरु लकडाउनको समयमा यस्तो फोहोरी खेलमा सक्रिय भएका हुन् ।
खनाललाईसँगै लैजाँदा प्रहरीको समेत सहयोग हुने भएकाले उनको समावेश गरिएको थियो । महोत्तरीस्थित घरमा पुगेपछि मात्र खनालसँगै दुई सांसद समेत आएको आफुले जानकारी पाएको डा. यादवले बताएका छन् ।
त्यसपछि काठमाडौं जान पूर्वआईजिपी खनालले असाध्यै कर गरेको उनको भनाई छ । पूर्वआईजिपी खनालले डा. यादवलाई मेरियट होटलमा छाडेर आफु घर गएको स्वीकार गरेका छन् ।
गृह प्रशासनको अप्रत्यक्ष सहयोग
डा. यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउनमा गृह प्रशासनको अप्रत्यक्ष सहयोग देखिएको छ । यतिबेला अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिले समेत पास पाएका छैनन् । तर, पूर्वआईजिपी र सांसदहरुलाई महोत्तरीसम्म जान दिइएको छ ।
महोत्तरीका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले त डा. यादवलाई लैजान नै सहयोग गरेका थिए । काठमाडौंबाट गएको टोलीलाई बर्दिबासको होटलमा राख्ने र खाना खुवाउने व्यवस्था उनैले गरेका थिए । जबकी लकडाउनको समयमा होटल सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाइएको थियो ।
एसपी अधिकारीले नै डा. यादवको लोकेसन पत्ता लगाएर काठमाडौंबाट गएको टोलीलाई घरमा पठाएको थियो । आफ्नो पिएसओमार्फत लोकेसन लिइएको डा. यादवले बताएका छन् । सिन्धुली र काभ्रेमा पनि उनीहरुलाई बिना पास नै आवातजावात गर्न दिइएको थियो । पूर्वआईजिपी खनालले आफु लकडाउनमा फसेका सर्वसाधरणलाई सहयोग गर्न गएको बताएका छन् । तर, सहयोगको काम गरेको कतै देखिएको छैन ।
अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य सांसद यादवको भनाईअनुसार यो फौजदारी मुद्दा हो । अपहरण मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पर्याप्त आधार भएको उनी बताउँछन् । पूर्वडिआईजी रमेश खरेल पनि यो घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो घटनाले आफूलाई पूर्वप्रहरी भन्न समेत लाज लागेको छ,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो गम्भीर घटनाको छानबिन हुनैपर्छ ।’
उजुरी नदिन दबाब
डा.यादवमाथि उजुरी नदिन दबाब परेको छ । कानूनी रुपमा अपहरणका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएपछि पीडितले उजुरी नदिएसम्म अनुसन्धान गर्न समस्या हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पीडितले उजुरी नदिएपनि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री नै जोडिएको मुद्दा भएकाले यसमा प्रहरीले सक्रियता देखाउने सम्भावना कम छ । शनिबार नेपाल विद्यार्थी संघ लगायत ६ वटा विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ती जारी गरी यो घटनाको प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नया पत्रिकाबाट